सुन जाँचकी फेरिएपछि खुलेको थियो महालक्ष्मी बैंकको अनियमितता - Charchit Entertainment!
Home bjob सुन जाँचकी फेरिएपछि खुलेको थियो महालक्ष्मी बैंकको अनियमितता
सुन जाँचकी फेरिएपछि खुलेको थियो महालक्ष्मी बैंकको अनियमितता
१० पुस, काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक, कुमारीपाटीमा करारमा राखिएका एक जना सुन जाँचकीको नयाँ आर्थिक वर्षमा म्याद थप भएन । साउनपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरिए ।
उनले साँवाब्याज नतिरिएका पुराना फाइलका धितो जाँच गर्न थाले । त्यसक्रममा ७ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कर्जा अनियमितरुपमा प्रवाह भएको देखियो । त्यसपछि यो विषय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्यो ।
बैंकबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा किटानी जाहेरी पर्यो र अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता पुष्टि भएपछि ६ जना पक्राउ परेका छन् । अझै केही फरार छन् ।
हालसम्म पक्राउ परेकामा बैंकका तीन जना शाखा प्रबन्धकसहित ऋणी छन् । ‘अन्य केही व्यक्तिको खोजी जारी राखेका छौं’, ब्युरोका प्रमुख डीआईजी सहकुलबहादुर थापा भन्छन् ।
१२ हजार ५ सय ग्राम कम सुन
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार सुन जाँचकीले हेर्दा धितोमा ५ हजार ग्राम सुन मात्र रहेको पाइएको थियो । साढे ७ करोड ऋण प्रवाहका लागि कम्तिमा १७ हजार ५ सय ५७ ग्राम सुन ढुकुटीमा हुनुपर्ने थियो ।
‘यति ठूलो अन्तर देखिएपछि हल्लीखल्ली सुरु भएको थियो र छानविन थालिएको हो’, ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘एकातिर ब्याज पनि नतिर्ने, अर्कातिर लिलाम गर्दा पनि कर्जा नउठ्ने भएपछि हामीकहाँ जाहेरी आइपुग्यो ।’
यो पनि पढ्नुहोसमहालक्ष्मी बैंकको अनियमितता प्रकरणमा कर्मचारीकै मिलेमतो !
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार हाल पक्राउ परेका ऋणी खोटाङ घर भइ ललितपुर बस्ने पूर्ण राई, देवानन्द राई, सन्दिप लिम्बुलगायतले तीन जना शाखा प्रबन्धकको कार्यकालमा ऋण लिएका थिए ।
ऋणीको इन्कारी बयान
कमसल धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्ने श्रृंखला ०६९ देखि ०७४ सम्म बैंकको शाखा प्रबन्धक बनेकी पिंकु पालिखेको पालाबाट सुरु भएको हो । उनी तीन वर्षअघि नै महालक्ष्मी बैंकको जागिर छाडेर एनएमबी बैंकतिर गएकी थिइन् ।
पालिखेपछि दुई वर्ष प्रबन्धक बनेकी स्मृति राणा पनि यो प्रकरणमा मुछिएकी छन् । त्यसपछिका प्रबन्धक अनिलसिंह सिजापति पनि अनियमित ऋण प्रवाह प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
ब्युरो स्रोतका अनुसार प्रबन्धकहरुले कुनै फाइदा लिएको हालसम्मको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छैन । तर, कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर र संलग्नताविना ऋण लिने प्रक्रिया पूर्ण नहुने भएकाले कार्यालय प्रमुखहरु छानविनको दायरामा तानिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
ऋणीहरुले भने कमसल धितो राखेको अभियोगलाई अस्वीकार गरेका छन् । लकडाउन र महामारीका कारण ब्यापार चौपट भएपछि ब्याज तिर्न नसक्दा कर्जा बढेकाले अनियमित देखिएको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रकरणमा संलग्न सबै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।